प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी, कसलाई कति मन्त्रालय? | Sambad Media
प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी, कसलाई कति मन्त्रालय?
काठमाडौ, २ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई पूर्णता दिन तयारी थालेका छन्। देउवाले २४ जेठमा माओवादी केन्द्र, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम तथा मधेसी दलको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।
कार्य दलका एक सदस्यले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल आइतबार अपराह्न मात्रै बैंककबाट काठमाडौं आएकाले सोमबारदेखि सरकार गठनको गृहकार्य थाल्ने जानकारी दिए। ‘ढिलोमा बुधबारसम्म सरकारले पूर्णता पाउनेछ’, ती सदस्यले भने।
कार्यदल तहमा मन्त्रालयको भागबन्डाको विषय टुंगिएको छैन।
११ मन्त्रालय कांग्रेस र ९ मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले लिएर अन्य मन्त्रालय साना दललाई दिने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि कुन–कुन मन्त्रालय भन्ने टुंगो लागेको छैन। विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका प्रभु साहले सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारमा सत्तारुढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबीच ७ मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिएको छ।